Ny filoha Clinton sy i Minster Bartlett dia niresaka momba ny ivon-toerana momba ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany sy ny krizy
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny filoha Clinton sy i Minster Bartlett dia niresaka momba ny ivon-toerana momba ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany sy ny krizy
Minisitry ny fizahantany any Jamaika, ny Hon. Edmund Bartlett, nihaona androany tamin'ny filoham-pirenena teo aloha Bill Clinton tamin'ny fivoriana faha-4 an'ny Clinton Global Initiative (CGI) Action Network momba ny fanarenana aorian'ny loza voajanahary ao amin'ny University of the Virgin Islands, St. Thomas, USVI.
Ny Filoham-pirenena dia naneho fahalianana lehibe hanohana ny Ivotoerana fizahan-tany momba ny fizahan-tany sy fitantanana krizy. Ny ivon-toerana momba ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany sy ny krizy eran-tany dia natao tany Jamaika ary naseho tamin'ny fiandohan'ity taona ity tao amin'ny Montego Bay avy amin'ny Hon. Ny minisitra Bartlett nandritra ny tsenan'ny fizahan-tany Karaiba 2019. Vao tamin'ny herinandro lasa teo dia ivon-toerana efatra hafa no nambara tany Japon, Malta, Nepal, ary Hong Kong.
Ny minisitra Bartlett dia hanao kabary ifotony amin'ny hetsika GCI amin'ny talata ary antenaina fa hanondro fa i Karaiba no faritra be voina indrindra eto an-tany. Ny ankamaroan'ny nosy dia miorina ao anaty fehikibo rivodoza Atlantika izay amokarana sela tadio, ary ny faritra dia mipetraka amina lalan-diso telo mahery vaika, fa io koa no faritra miankina amin'ny fizahan-tany indrindra eto an-tany.
Ny filoha Bill Clinton sy ny sekreteram-panjakana amerikanina teo aloha Hillary Rodham Clinton dia ao amin'ny fivoriana fahefatra an'ny Clinton Global Initiative (CGI) Action Network momba ny fanarenana aorian'ny loza voajanahary ao St. Thomas, Nosy Virgin US. Ny fihaonana, fiaraha-miasa amin'ny Bloomberg LP sy Love City Strong, dia hanohy ny dinika momba ny fanarenana ny rivodoza any amin'ny faritra Karaiba bebe kokoa, ary hiresaka lohahevitra toy ny fotodrafitrasa, fambolena, fampandrosoana ny mpiasa, angovo madio sy azo havaozina, fahasalamana ary zavakanto sy kolontsaina Karaiba. .
Ny fomba fiasa ao amin'ny Action Network dia mampivondrona vondrona mpandray anjara isan-karazany hifantoka amin'ny fametrahana laharam-pahamehana ny olona, ​​ao anatin'izany ny fanaovana ho laharam-pahamehana ny ho avy azo antoka amin'ny alàlan'ny fanampiana ireo vondrom-piarahamonina handamina sy hiomana amin'ny tafiotra amin'ny ho avy sy ny fiakaran'ny vokan'ny fiovan'ny toetr'andro.
Ny Ivotoerana momba ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany sy ny krizy eran-tany, natsangan'ny minisitra Bartlett, dia toa fiderana tonga lafatra ho an'ireo hetsika notarihin'ny filoha amerikana teo aloha.
FAA dia mamoaka ny fialana amin'ny drôna misy parachute
World Travel Awards 2019: lisitry ny mpandresy feno ho an'i Afrika sy ny Ranomasimbe Indianina